B&F ဖုန်း app ခံစားခွင့်များ
Jelly Bunny Myanmar
အစားအစာ နှ့င် အဖျော်ယမကာများ
Regional Bistro Bar
PullMan Centrepoint Hotel
The Link Ygn Hotel
The Tree Top Wine Bar
DIY BBQ & HOT POT
HTI Restaurant & Bar
La Min Thint
Shwe Pyi Nan Restaurant
Western Park Restaurants
Bar Code ( Bar and Restaurants)
Aroma2India Food Restaurant
Suki Yaki Thai Hot Pot
Huck Ice Cream Bar
Summit Parkview Hotel (Buffet)
Summit Parkview Hotel (Cake)
Cafe Sule (Sule Shangri-La)
Peacock Lounge ( Sule Shangri - La Hotel )
Gourmet Shop ( Sule Shangri - La Hotel )
Thai Pot BBQ and Hotpot
Yoogane Korean Restaurant
Jo Jo Hot Pot
Rangoon Indian Restaurant ( Chit Tee )
Da Hide Out Cafe & Dining
Bombay Burma Cafe and Restaurant
Tout P ( Pork Stick )
Old Town White Coffee Myanmar
TOM N TOMS Coffee Myanmar
Organic Spicy ( Yangon )
Organic Spicy ( Mandalay )
The Juicy Way Myanmar
Ocha Bubble Tea ( Mandalay)
Ocha Bubble Tea ( Yangon )
Pizza Maru Myanmar
KAIYO Japanese Restaurants & Sushi Bar
The Coriander Leaf ( Indian Restaurants )
Corriander Leaf Restropub ( Inidain Restaurant)
Fire and Ice Bar
Dr.Kitchen Food Service
Shine On You Spa and Beauty
Pathlab Diagnostic Centre
DERMA GRAND (Aesthetic Clinic)
HoCo Myanmar ( Mobile Accessories & Others)
ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ နှင့် အခမ်းအနားပွဲများ
Mya Thint Sar
Myo Myo ( Lacquer ware)
The Link 83 Mdy Hotel
Shwe Pyi Nan Hotel
Diamond Hotel Chaung Tha
HOTEL PREINMAR Bagan
Famous Traveller Express
Famous Hotel (Pyin Oo Lwin)
Famous Hotel (Ngapali)
Famous Hotel ( Kalaw)
Famous Hotel ( Bago)
Famous Hotel (Bagan 1)
Famous Hotel (Bagan 2)
Kyite Hti Yoe Travel Package
MIA Travel & Tour
Book Myanmar Hotel ( Hotel Yadanar Oo )
Book Myanmar Hotel ( Hotel Apex )
Book Myanmar Hotel ( Royal City Hotel )
Grand Mercure Golden Empire Hotel
Book Myanmar Hotels
ဖက်ရှင် နှင့် လူနေမှုပုံစံ
YSY Modern Furniture (Mandalay)
စိန် နဲ့ မြ မွေ့ရာ
POH POH Gold and Jewellery
Lafee Cofee & Tea
Royal 3D Cinema (Mandalay)
SH Motorcycle ShowRoom ( Mandalay )
YL Event Management (Mandalay)
U Tin Oo Noodle
Soi 46 ( Foot Reflexology )
United Vision optics & eyecare center
တစ်နှစ်ပတ်လုံး သိန်းချီတန်တဲ့ ပရိုမိုးရှင်းတွေခံစားခွင့်ရှိနေဖို့ မြန်မာငွေ ၉၉၀၀ ကျပ် သာလို့ပါတယ်!!
Get Discounts with B&F Clubcard! Order or Takeaway or in Shop. See detail in the App.
ဝင်ရောက်ရန် | စာရင်းသွင်းရန်
30% off For Funny Bug
30% off For Funny Bug အသေးစိတ်
ပရိုမိုးရှင်း Swensens Myanmar
Get 30% Off Discount For Funny Bug Only
ရေခဲမုန့်အသဲစွဲလေးတွေအတွက် မဖြစ်မနေရောက်ဖူးသင့်တဲ့ နေရာ Swensen’s Myanmar
ရန်ကုန်မြို့မှာနာမည်အကြီးဆုံးရေခဲမုန့် ၊ လူငယ်တွေကြားရေပန်းအစားဆုံးရေခဲမုန့်ဆိုင်လေး ဆိုလည်းမမှားပါဘူး…
Swensen’s Myanmar ကရေခဲမုန့်တွေဟာဆိုရင်တော့ အရသာကလည်းကောင်းမွန်ပြီး ၊ ဒီဇိုင်းလေးတွေကလည်း မစားရက်လောက်အောင် ဖြစ်နေပြန်ရော ၊ ပြီးတော့ ရာသီပေါ် သစ်သီးလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Sundae လေးတွေကလည်း အမြဲထွက်ရှိနေကျ…
အခုဆိုရင်လည်း မိုးရာသီ အစဦးလေးမှာ သရက်သီးရာသီအချိန်မို့ စိန်တစ်လုံးသရက်သီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ချိုချိုမွှေးမွှေး ဆွမ်းမွေးကောက်ညှင်း ရေခဲမုန့်လေးတွေရရှိနေပြီနော်…
ဒါ့အပြင် B&F Weekly Promotions လေးနဲ့သွားရောက်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ Sundae အမျိုးစားတွေအားလုံးထဲကမှ ချစ်စရာကောင်းပြီး စားလို့အရမ်းကောင်းတဲ့ Kids Sundae ထဲက Funny Bug Only ကို (30%) Off နဲ့ရရှိမှာပါနော်…
ချစ်စရာပိုးကောင်ပုံစံခွက်လေးထဲမှာ အရသာရှိလွန်းတဲ့ Funny Bug Only လေးကို B&F Weekly Promotions ရဲ့ Coupon နဲ့ဖြစ်ဖြစ် Mobile Appလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် 30% Off လေးနဲ့ သုံးဆောင်ရမှာပါ..
Swensen’s Myanmar လိပ်စာလေးတွေကတော့
Level 5, Junction City Shopping Mall, Pabedan Tsp, Yangon.
3rd Floor, Myanmar Plaza Shopping Mall, Bahan Tsp, Yangon.
Ground Floor, Entrance of Ocean Super Centre (Shwe Gone Daing), Bahan Tsp, Yangon
အခုလို Promotions လေးပေးနေတဲ့ အချိန်လေးတွေက အကန့်သတ်လေးရှိတာမို့ လက်လွှတ်မ ခံစေချင်ဘူးနော်…
Swensen’s Myanmar ရဲ့ Promotions ကြီးကိုရယူလိုတယ်ဆိုရင်တော့ B&F Weekly Promotions Mobile App ရဲ့ Swensen’s Myanmar စာမျက်နှာက Use Now ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီး ကျလာတဲ့ Success စာမျက်နှာကို Bill မရှင်းမီ ပြလိုက်ရုံနဲ့တင် Promotions ကြီးကို ခံစားနိုင်မှာပါ။ ကူပြန္ေလးေတြရွိရင္လည္း ကူပြန္ေလးေတြနဲ႔ သြားေရာက္အသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္ေနာ္..
Mobile App အသုံးပြုပုံနဲ့ ပက်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Promotions အကြောင်းရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက 09-969910128,09-969910115 တို့ကိုရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Swensens Myanmar ဆိုင်
Level 5, Junction City Shopping Mall, Pabedan Tsp, Yangon.3rd Floor, Myanmar Plaza Shopping Mall, Bahan Tsp, Yangon.3rd Floor, Myanmar Plaza Shopping Mall, Bahan Tsp, Yangon
ဖုန်းနံပါတ် : #swensensmyanmar
သင်၏ အကောင့်ဖြင့် ဝင်ရောက်ရန်!
Ends Wednesday, September 25, 2019
© 2020 Weekly Promotions. All rights reserved. Created by Evercrystal IT Solution